आफ्नो श्रीमानलाई मेलम्चीको बाढीले बगाएपछी श्रीमतीको एस्तो अवस्था !! मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो) – Khabar28media
आफ्नो श्रीमानलाई मेलम्चीको बाढीले बगाएपछी श्रीमतीको एस्तो अवस्था !! मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो)
आफू खान बनाउदै गर्दा श्रीमान बाढी आयो भनेर माछा पोखरीमा कुलो थुन्न जादा बाढीले बगाएपछी छोरालाई अंगालोमा बेर्दै गरिन बिलौना (भिडियो हेर्नुस्) । मेलम्ची बजारमा आएको बाढीमा परेर अहिलेसम्म तीन जनाको मृ-त्यु भएको छ ।
मंगलबार बेलुकीदेखि सुरु भएको बाढीमा परेर अहिलेसम्म तीन जनाको मृ-त्यु हुँदा १७ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । मृ-तकहरूमा चिनियाँ नागरिक गोङ टियान छियो, यु चि झु र भारतीय नागरिक कमल लोप्चन महतो रहेका छन् । बाढीमा परेको स्थानीयको उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी ३ सय ५० जनशक्तिको परिचालन गरिएको छ ।
सडकहरु पनि भत्किएकाले यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ । सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ उद्दार भएको छ । खोलामा अझै पनि पानीको बहाव नघटेकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । खोलामा बाढी आएको थाहा पाएपछि माधव भण्डारी खोलामा माछा पोखरीमा आउने कुलो थुन्न जादा बाढीले बगाएको छ । श्रीमतीले भावुक हुदै सुनाएकी सबै कुरा, भिडियाे हेर्नुस्:-
Previous Article जे बर मागे पनि पुग्ने, एकपटक दर्शनको लाग पुग्नै पर्ने, पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो सहित)
Next Article ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती खुल्दै, यति ठुलो सङ्ख्यामा लिदै छ नेपाली लाइ, के छ प्रक्रिया ?